DHAGEYSO: Madaxweyne Laftagareen oo war ka soo saaray weerarradii dhawaan ka dhacay deegaannada K/ Galbeed | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Madaxweyne Laftagareen oo war ka soo saaray weerarradii dhawaan ka dhacay...
DHAGEYSO: Madaxweyne Laftagareen oo war ka soo saaray weerarradii dhawaan ka dhacay deegaannada K/ Galbeed
Baydhabo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa ka hadlay weerarradii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaannada Koonfur galbeed oo ay Al-Shabaab ka geysteen deegaanno ka tirsan koonfur Galbeed.
Madaxweyne Laftagareen ayaa sheegay in weerarrada ka dhacay degaannada Deynuunaay iyo Goofgaduud ay yihiin kuwo soo laab laabtay oo keeni kara culeys farabadan oo dhanka Amniga ah, isla markaana loo baahan yahay in tallaabo la qaado.
Ciidamada DF Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ayuu faray, inay qaadaan tallaabooyin la xiriira dhanka Amniga iyo inay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ka saaraan deegaannada ay kaga sugan yihiin Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftaagreen ayaa hadalkiisa imaanaya, xilli labadii toddobaad ee la soo dhaafay weerarro ay mas’uuliyin ku geeriyoodeen ka dhaceen deegaanno ka tirsan Gobolka Baay.
Halka hoose ka dhageyso Codka Madaxweyne Laftagareen: